News - Mbipụta na nkwakọ ngwaahịa: kedụ ihe ị maara gbasara ọkwa ọkwa akpa
Akpa nkwakọ ngwaahịa dị mfe iburu ma enwere ike iji ya jide ihe. Dị iche iche mmepụta ihe, dị ka kraft akwụkwọ, na-acha ọcha kaadiboodu, na-abụghị kpara akwa, wdg know maara kpọmkwem nhazi ọkwa nke Akpa?
1. Nkwado akpa nkwakọ
Nkwado akpa na-emepụta site na nkwakọ ngwaahịa iji kwalite ma mepụta ngwaahịa ha. Typedị nkwakọ ngwaahịa a nwere agba ọgaranya, ederede na ụkpụrụ dị iche iche na-adọrọ adọrọ ma na-echekwa karịa akpa aka nkịtị, si otú a na-adọta uche ndị ahịa ma na-akwalite ahịa Ahịa.
Na ihe ngosi, ị nwere ike ịhụ ụdị nkwakọ ngwaahịa a ọtụtụ mgbe. Aha ụlọ ọrụ ahụ, njirimara ụlọ ọrụ, ngwaahịa ndị bụ isi ma ọ bụ nkà ihe ọmụma azụmahịa nke ụlọ ọrụ na-ebipụta na nkwakọ ngwaahịa ahụ, nke a na-adịghị ahụ anya na-akwalite onyonyo ụlọ ọrụ na onyonyo ngwaahịa, nke hà nhata A mkpọsa mkpanaka, yana ọtụtụ mmiri na-aga, enweghị ike ịbute naanị ihe achọrọ nke ibu, kamakwa o nwere ezigbo mmetụta mgbasa ozi, yabụ ọ bụ ụdị mgbasa ozi na-ewu ewu maka ndị nrụpụta na mmemme akụ na ụba na azụmaahịa. Ihe pụrụ iche nke ụdị ụdị nkwakọ ngwaahịa a, ka a na-emekwu ọfụma, nke ka mma na mgbasa ozi.
2. Akpa ịzụ ahịa
Bagdị akpa nkwakọ ngwaahịa a bụ nke a na-ahụkarị, ezubere ya maka nnukwu ụlọ ahịa, ụlọ ahịa na ebe ndị ọzọ, iji weta mma maka ndị na-azụ ahịa ibu ngwaahịa. Kinddị akpa nkwakọ ngwaahịa a kachasị nke ihe plastik. E jiri ya tụnyere akpa aka ndị ọzọ, usoro ya na ihe ya siri ike ma nwee ike ijide ihe ndị ọzọ, ọnụ ahịa ya dịkwa ala. Bagfọdụ akpa aka ịzụ ahịa ga-ebipụta ozi ngwaahịa ma ọ bụ ụlọ ọrụ, nke nwekwara ike ịrụ ọrụ na nkwalite na mgbasa ozi.
3. Onyinye nkwakọ akpa
A na-eji akpa onyinye dị iche iche onyinye, dị ka ọrụ igbe igbe, nke nwere ike ịbawanye uru onyinye. Enwere ụdị ihe atọ dị iche iche: plastik, akwụkwọ, na akwa, yana ngwa a jikwa gbasapụ. A mara mma onyinye nkwakọ akpa nwere ike ka mma setịpụrụ gị onyinye. Na ụdị ndụ a na-agbanwe agbanwe, ndị na-azụ ahịa nwere ihe ndị dị elu ma dị elu maka akpa ngwugwu onyinye, na akpa ngwakọ onyinye ndị a na-ewu ewu.
Ejiri akpa akpa akpa dị ka ihe ha si dị
N’ime ụlọ ọrụ na-ebi akwụkwọ, a na-eji ihe ndị a na-etinye n’akpa akwụkwọ akpa akwụkwọ, akwụkwọ ọcha, akwụkwọ kraft, na kaadiboodu ọcha. N'ime ha, akwụkwọ a na-ekpuchi bụ nke a na-ewu ewu karịa n'ihi ọcha ya na ogo ya, ezigbo mbipụta ya, yana mmetụta mgbasa ozi dị mma mgbe ebipụtara. Ọtụtụ mgbe, mgbe ị na-eji ihe nkiri ọkụ ma ọ bụ ihe nkiri matte kpuchie elu nke akwụkwọ ahụ a kpuchiri ekpuchi, ọ bụghị naanị na ọ nwere ọrụ nke mgbochi mmiri na nkwụsi ike, kamakwa ọ na-adịkwu ọcha.